Banaan bax ka dhan ah Wargeyska Charlie Hebdo oo ka dhacay degmada Cadaado – Radio Muqdisho
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday af-lagaaddadii wargeyska Charlie Hebdo uu u geystay nabigeenna Muxammad (N.N.K.H) ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Isu soo baxaan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka degmada ayaa waxaa ka qeybgalay culimaa’udiin iyo qeybaha kale ee bulshada degmadaasi ku nool, kuwaasi oo sitay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan Wargeyska Charlie Hebdo.
Guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Cadaado, Cabdulqaadir Xuseen Shuuriye oo ka hadlay goob ay isugu yimaadeen dadka dibad baxay ayaa sheegay inay ka xunyihiin sawir-gacmeedkii lagu af-lagaadeeyay nabigeena Muxammed (N.N.K.H), isagoo ugu baaqay umadaha Muslimiinta ah inay wadajir dareenkooda uga muujiyaan gafka loo geystay nabigeena Muxammad (N.N.K.H).
Qaar ka mid ah maamulka degmada Cadaado oo dhankooda goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ay aad uga xunyihiin sawir gacmeedka lagu aflagaadeeyay Nabi Muxammad (N.N.K.H).
Culimada degmada ku nool ayaa dunida Islaamka , gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay u istaagaan sidii ay u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan gafka loo geysey Nebi Muxammad (N.N.K.H).
Dibad baxyo kale oo lagu cambaareeyay af-lagaaddada lagula kacay nabi Muxammad (N.N.K.H) ayaa lagu qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Gaalkacyo.